Wararka - Calaamadda kala-wareejinta kuleylka
Warqadda wareejinta kuleylka waxaa sidoo kale loo yaqaannaa daabacaadda warqad dahaarka leh. Waraaqda wareejinta kuleylka waa lakab rinji cad ah dusha sare ee warqadda salka, aad loo cadaadiyay loona shaqeynayo, oo loo qeybiyay hal dhinac iyo laba dhinac. Waxaa badanaa loo adeegsaday daabacaadda daabacaadda, daabacaadda silig ganaax ah, sida albumka sare ee sawirka, kalandarka, buugaagta iyo xilliyada.
Isku-dhejintu waa nooc ka mid ah walxaha isku-dhafan, oo ka samaysan warqad, filim ama waxyaabo kale oo gaar ah sida warqadda wejiga, dhabarka ku dahaaran dhejiska, warqadda ilaalinta silikoon ee dahaarka leh sida warqadda hoose. Ka dib daabacaadda, dhimista-jarista iyo ka-shaqeynta kale ee ku jirta sumadda alaabta ee dhammaatay. Waxaan u isticmaalnaa warqadda kala wareejinta kuleylka warqadda wajiga oo ku saleysan calaamadda xabagta, oo loo yaqaan "warqadda wareejinta kuleylka warqadda kuleylka ee" koollo "
Guud ahaan, waqtiga kaydinta ee sumadaha wareejinta kuleylka waxay qiyaastii tahay 2 sano, ka yar saamaynta heer kulka. Xarig ku-wareejinta kuleylka ayaa looga baahan doonaa inuu daabaco sumadaha.
Baaxadda codsiga: supermarket, maaraynta agabka, sumadda dharka, khadka wax soo saarka warshadaha. Ku habboon nuska-iftiinka daabacaadda midabka ee dhiirrigelinta iibka iyo warshadaha. Codsiyada caadiga ah waxaa ka mid ah calaamadaha qurxinta, sumadaha dawooyinka iyo sumadaha warshadaha cuntada. Waxaa lagu dhejin karaa inta badan dusha sare ee dusha sare iyo dusha sare, oo ay ku jiraan kartoonada, filim caag ah.
Maalmahan, sumadda wareejinta kuleylka ayaa sidoo kale loo adeegsaday baakadaha degdegga ah. Baakaduhu waxay yeelan karaan calaamado ku lifaaqan ama ku dhex jira baakadka. Kuwaani waxay wadan karaan qiimeyn, barcode, aqoonsi UPC, hagitaan adeegsi, cinwaanno, xayeysiin, cuntooyin, iyo wixii la mid ah. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa inay ka caawiyaan iska caabinta ama tilmaamida fara-xumeynta ama baafinta.
Iyo sumadaha boostada lagu garto cinwaanka cinwaanka, soo diraha iyo wixii macluumaad kale ah ee faa iidada u leh socodka. Baakado badan oo softiweer ah sida soo saaraha ereyada iyo barnaamijyada maamulaha xiriirka waxay soo saaraan calaamado isku-dheelitiran oo boostada laga soo diro oo laga helo xogta la raacayo oo waafaqsan heerarka boostada. Calaamadahaani sidoo kale waxaa ka mid noqon kara barcode marinnada iyo shuruudaha maareynta gaarka ah si loo dedejiyo keenista.
Waqtiga boostada: Oct-20-2020